रविन्द्र अधिकारीको प्रस्ताव- दशैंको लामो बिदा घटाउँ
काम नगरी खानु सुख होइन
काठमाडौं : नेकपा (एमाले) का पोलिटब्यूरो सदस्य रविन्द्र अधिकारी व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिका सभापति छन्। संसदमा विकास समितिको समापतिको रुपमा विकासका मोडेल, नेपालमा अहिले विकासको अवस्था तथा विकासको विभिन्न नीति नियमका विषयमा खरो रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका रविन्द्र अधिकारीसँग बडा दशैं २०७३ को सन्दर्भमा दशैं, तिहार जस्ता चाडपर्वमा हुने लामो विदाले विकास निर्माणका योजनाहरुमा के असर गर्छ भनेर कुराकानी गरेका छौं।
कार्यकर्ता पढाउन एमालेले खोल्यो स्कुल: सशुल्क कक्षामा के के हुन्छ पढाई?
काठमाडौं : सोमबार बिहानको १० बजे। ललितपुर च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान भवनमा मानिसहरु हतार-हतार हलभित्र प्रवेश गर्दैछन्। 'लौ प्रशिक्षक आइसक्नुभयो है, फेरि ढिला हुन सक्छ', एक सहभागी भन्दै थिए, 'समयमा हलभित्र नगए ढोका बन्द हुन्छ।' कालो डायरी र कलम बोकेका ३०/३५ जना हलभित्र प्रवेश गरे।
कसको हो त्यो हराएको भोटो? जुन आज जात्रामा देखाइँदैछ
काठमाडौंमा मनाइने लामो जात्रा रातो मछिन्द्रनाथको रथयात्रा आज भोटो देखाएर समापन हुँदैछ। वर्षा तथा सहकालका देवताका रुपमा मानिने मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा करिब दुई महिना चल्छ। बैशाखदेखि शुरु भएर असार शुक्ल चौथीको दिन समापन गरिन्छ।
नेपाली चाडपर्वअनुसारका खानाको विशेषता के छ?
खाना विशेषज्ञ नवराज उपाध्याय भन्छन्- चाडपर्वअनुसार खाने गरिएको खानामा बैज्ञानिक आधार छन्।
आज साउन १५। हाम्रो नेपाली परम्परा अनुसार आज खिर खाने दिन। हामी नेपालीहरु खानामा सौखिन छौ। हामीले मान्दै आएका यस्ता पर्वहरु छन् जस्को सांस्कृतिक मूल्यमान्यता सँगै खानपानका समेत छुट्टै विशेषता रहिआएका छन्।
रविन्द्र अधिकारीको प्रस्ताव- दशैंको लामो बिदा घटाउ...
कार्यकर्ता पढाउन एमालेले खोल्यो स्कुल: सशुल्क कक्ष...
कसको हो त्यो हराएको भोटो? जुन आज जात्रामा देखाइँदै...